RASMI: Arsenal oo iibisay mid ka mid ah xiddigaheeda – Gool FM
Dajiye July 4, 2019
(London) 04 Luulyo 2019. Kooxda kubadda cagta ee Arsenl ayaa xaqiijisay in goolhaayeeda David Ospina uu si toos ah ugu wareegay naadiga reer Talyaani ee Napoli.
Gunners ayaa ku shaacisay website-keeda rasmiga ah in David Ospina uu si rasmi ah ugu biiray kooxda Napoli, kaddib markii uu qaab amaah ah ugu ciyaaray naadiga ka dhisan koonfurta Talyaaniga xili ciyaareedkii lasoo dhaafay.
David Ospina ayaa u ciyaaray kooxda Napoli 24 kulan xili ciyaareedkii lasoo dhaafay dhamaan tartamada kala duwan, wuxuuna shabaqiisa ilaashaday 8 kulan.
Ospina ayaa yimid kooxda ka dhisan waqooyiga magaalada London ee Arsenal sanadkii 2014, isagoo kaga soo biiray naadiga Nice ee dalka France, wuxuu u saftay 70 kulan. Wuxuuna kula guuleystay 2 jeer ee ah FA Cup sanadihii 2015 iyo 2017, iyo sidoo kale koobka FA Community Shield sanadkii 2017-kii.
Si kastaba ha ahaatee, Arsenal ayaa kaga mahadcelisay goolhaayaha reer Colombia ee David Ospina, wax walba uu u soo qabtay Kooxda, iyagoona u rajeeyay mustaqbal aan u wanaagsan.
RASMI: Kulamada lagu soo xirayo horyaalka La Liga xilli ciyaareedka 2019-2020 oo la shaaciyey.. (Yey ku soo xiran doonaan Atletico, Real iyo Barca?)